Umdonsiswano ngobukhosi bakwaZondo - Ilanga News
Home Izindaba Umdonsiswano ngobukhosi bakwaZondo
Umdonsiswano ngobukhosi bakwaZondo
AbakwaZulu bathi lobu bukhosi ngobabo, bathathwa kudala
UMNU Nhlakanipho Zulu ongumnikazi weThe Chillers, oNdini ophakanyiswe yindlu yakubo ukuba abe yinkosi yase-Mpangisweni.
LUNGENA kwelinye igiya udaba lobukhosi bakwaZondo, eMpangisweni, eVryheid, njengoba sekuvele abakwaZulu, abathi ubukhosi bakule ndawo ngobabo, sebeze baqoka uMnu Nhlakanipho “Mageba” Zulu – ongumnikazi wendawo yobumnandi, iThe Chillers, esoNdini – ukuba kube nguyena othatha lesi sihlalo.
UMageba kuvela ukuthi ngo-wendlu yakwaZulu yasekuBhense-ni, kanti abakwabo bathi abakwaZondo bathatha ubukhosi bakubo emuva kokudlula emhlabeni ku-kakhokho wabo, uMahanana.
Kuqubuka lolu daba nje, kuzo-khumbuleka ukuthi ILANGA seli-lobe kaningana ngamanye amalu-ngu omndeni wasebukhosini ba-kwaZondo, ochitha inkosi yawo, uDouglas Zondo, uthi akabekwa-nga ngendlela efanele, ngakho ku-mele ashenxe kulesi sikhundla.
Ekhuluma neLANGA, uMnu Lindinkosi Zulu wendlu yaseKu-bhenseni, okuyiyona eyaphakamisa uMageba ukuba abe yinkosi emhlanganweni owawumhla ka-3 kwephezulu, oNdini, uthe lesi si-nqumo basithathe ngoba isihlahla somndeni wakubo sikhomba yena. “Umntwana Nhlakanipho uyinkosana kaMntwana Richard kaFa-niel kaMbhedula kaMahanana, okunguye abaKwaZondo abathatha ubukhosi emuva kokuhamba kwakhe emhlabeni.
“UMntwana Mahanana wayeza-lwa yiSilo uMpande kaSenzakhona.
“Kwathi uma ukhokho Mahana-na ehamba emhlabeni, kwabamba umshana wakhe, induna uMadisa wakwaZondo, ubukhosi bahamba kanjalo-ke kithina.
“Manje sesifuna ubukhosi baki-thi bubuyele kithina.
“Sihlanganile siwumndeni saphakamisa uNhlakanipho, saze sathatha amaninithi omhlangano nomlando wesihlahla sawuhambisa eMnyangweni wezokuBusa ngo-kuBambisana nezoMdabu Kwa-Zulu-Natal njengoba isicelo soku-buyiselwa ubukhosi sasesivele si-sifakile.
“Into esiyilindile manje wukuthi undunankulu (uMnu Sihle Zikala-la) aqoke ikhomishini ezophenya ngobukhosi, okuyothi uma ithola ukuthi bathathwa ngendlela engafanele, ibubuyisele kithi,” kusho uMnu Zulu.
UMageba uthe uyakwemukelwa ukuphakanyiswa kwegama lakhe. “Empeleni lolu daba ludala kabi, abakithi bake balukhuluma ngisa-funda, ngasengicela ukuba ngiqe-de isikole.
“Ngabatshela ukuthi eyobukhosi ngiyoyibheka uma sengiphothule izifundo zami. Nempela bangili-nda ngaphothula iziqu zami eDu-rban University of Technology,” kusho yena.
UMnu Bongani Zondo ongumfo-wabo omncane weNkosi Douglas Zondo, uthe abantu bakwaZulu ba-khe ngaphansi kobukhosi babo, bafika kudala bethi kunethuba elilapha endaweni yoyisemkhulu.
“Sihlalisene kahle nabo. Seku-ngaba yishwa uma sebengaqubuka manje bethi bafuna ubukhosi ngo-ba lobu bukhosi selokhu ngazalwa, ngazi ukuthi ngobakwaZondo.
“Ngisola ukuthi labo abasho kanjalo bangosomathuba abezwe ukuthi silungisa izinto zobukhosi lapha endaweni, basebengena ngenxeba. Kayikho le nto abayi-shoyo,” kusho uMnu Zondo.
USolwazi Sihawu Ngubane oyi-sazi sezamasiko nomlando, uthi ngokwazi kwakhe, uyise weNkosi Douglas Zondo, uDavid, yathatha umntwana wasendlunkulu owaye-zalwa yiSilo uSolomon, okwenza kubenobuhlobo phakathi kwalezi zibongo zombili. “Kangikholwa ukuthi kungaba nombango njengoba sebeyizihlobo ezingaka,” kusho yena. Akathandanga ukwanda ka-khulu ngalolu daba njengoba ethi lusabhungwa.
UMnu Senzelwe Mzila okhulu-mela uMnyango wezokuBusa ngo-kuBambisana nezoMdabu KwaZu-lu-Natal, uthe zikhona izinhlelo eziqhubekayo kuhulumeni zokuthi kuqalwe ikhomishini ezocubungula imibango yobukhosi njengoba ikhomishini kaNhlapho yagcina imile eminye imibango ingakase-tshenzwa.
Previous articleUBenni nenselelo kwiChiefs neBucs
Next articleKusolwa umona kobulawe ngumyeni